Waa maxay ITIL? Maxay yihiin faa'iidooyinka shahaadada ITIL? | ITS
Waa maxay ITIL?
Shahaadooyinka Shahaadada ee ITIL iyo Nidaamka Deynta
Dib u eegista shahaadada ITIL
Kharashka shahaadada ITIL
Waa Maxay Faa'iidooyinka Laga Saaro ITIL®?
ITIL (Nidaamka Maktabadda IT Infrastructure) waxaa loogu talagalay hay'ad-dejinta dhammaan adeegyada adeega IT-da iyo hawlaha la xiriira kuwaas oo ku daraya adeegyada, tusaale ahaan, xulashada, qorsheynta, abuurista, bixinta, bixinta, iyo falanqaynta. AnigaMaaraynta maamulka waxay ogolaataa ururinta xogta, falanqaynta iyo soo bandhigida, iyadoo raacaysa dariiqooyinka la isku hallayn karo si ay u galaan una daraaseeyaan. Waa qaabka maareynta adeegga IT-da guud ahaaneed ee ugu badan aduunka si loo dhamaystiro heerarka adeegga aan fiicnayn iyo kor u qaad wax soo saar.
Maaddaama ilaha xogta ay kor u kici karaan, waxay u noqotaa daruuri lagama maarmaanka u ah ganacsiga qandaraaska iyo diyaarinta khubaro ku sugan mowqifka xogta, iyo falanqaynta. Waa halkan Shahaadada ITILs waxay u jeestaan ​​koorso qasab ah oo loogu talagalay xirfadlayaasha lagu dhiirigeliyo iyaga oo isu diyaarinaya cilmi-baarayaal ama khabiiro xog ah. Ku gudubka imtixaanka ITIL wuxuu soo jeedinayaa inaad adigu u adeegsan karto waxbarashada ITIL ee kobcinta adeegyadeeda maaraynta adeegga, iyagoo bixinaya dardargelin yar.
Tijaabinta waa imtixaan 3-maalinta oo leh afar heer oo aqoonsi ah:
1.Heerka aasaasiga ITIL kuwaas oo xoogga saaraya ereyada iyo qaabka adeegga ITIL ee taageerada iyo bixinta adeegga (credit credits 2),
2. Heerka dhexe ee ITIL waxa ku jira noocyo kala duwan oo tababar ah, oo aad ka soo qaadan karto laba qaybood, hannaanka nolol-maalmeedka ee lagama maarmaanka ah oo leh halbeeg dheeri ah (15 credit),
3.ITIL Heerka Aqoonta hubi barashada iyo dabacsanaanta lagu aqoonsaday ITIL (XIUMX credit) iyo
4.Heerka Xirfadda ITIL waxaa ka mid ah qorsheynta, maareynta iyo hawlgallada maareynta adeegga macluumaadka ee dhammaanba (Ma lahaan dhibco dheeraad ah inkastoo aan ka yareyn sanado 5 ee kaqeybgalka shaqada ee Domain).
* Dhibcaha waxay ku jiraan heer kasta. Sidan, darajooyinkii hore ayaa loo qoondeeyay heerarka soo socda.
Qiimaha Barnaamijyada ITIL waxay u kala duwan yihiin heerar kala duwan iyo hay'ado. Waxay sidoo kale ku tiirsan tahay tirada maalmaha barnaamijka diyaarinta. Marka iyo weyn, qiimaha ayaa ku dhex yaal US $ 200 illaa US $ 1000, taas oo ka duwan wakhtiga barnaamijka diyaarinta. Waqtiga barnaamijka ITIL waa 2 maalmaha 7.
Waad ogaan kartaa halkan: - Buuga sare ee loogu talagalay Akhrinta si aad u hesho Shahaadada Aasaasiga ITIL
Halkaan waxaa ka mid ah qadarinta la qaaday heer kasta oo heer kasta ah, laakin dib u xusuusta inay ka bedeli karto hay'ad si ay u bilawdo ku-tiirsanaanta heerarka awoodda barayaashooda, muujinta hababka, iyo wixii la mid ah.
ITIL Foundation (laga helo hay'ad la aqoonsan yahay) US $ 205.00
ITIL Foundation (Si toos ah) US $ 226.00
Qiimaha Shahaadada ITIL Kooraska ama imtixaanka ayaa laga yaabaa inay isbedelaan waqtiga.
Ku dhajinta ITIL liiskaaga liiskaaga waa mid faa'iido leh marka ay tahay inaad u baahan tahay inaad sameysid cabbiraad ah adigoo adeegsanaya habka maaraynta adeegga IT-da si aad hoos ugu dhigto shaqooyinka la xiriira IT. Waa balaarin hufan oo ku saleysan casriga shaqsiga. Xirfadlaha koorsada ITIL iyo xaqiijinta waxay muujineysaa baaqooda ku aaddan isticmaalka marxaladda ITIL.
ITIL waa qaab awood leh oo loo adeegsado hawlgal IT ah. Laga soo bilaabo caddaymaha la garan karo ee qorshaynta, horukaca, bixinta iyo taageerada, waxaa lagu xiri karaa si loo dhamaystiro qaababka qaabsocodka. Waxay hagaajin kartaa dabeecadda shaqadaada ee kormeerayaasha IT-ga, la taliyeyaasha, madaxda, khabiirada ganacsiga ama shaqaalahan oo kale iyaga oo siinaya tiir diirad saaran si ay u xakameeyaan suuqyada iyada oo la adeegsanayo habka ugu fiican ee IT-ga.
Go'aanka - ITIL waa maktabad weyn oo ah xogta maamulka IT-da ee ururka adduunka ugu weyn. Ku biirida koorsada ITIL waxay siin doontaa xirfadlayaasha IT-ga ah qalab ballaaran oo isku xiran si ay u shaqeeyaan oo wax uga qabtaan hababka maamulka IT iyo hababka ugu fiican.
Sida Loo Helo Shahaadada Aasaasiga ah ee ITIL